ကမ်းလှမ်းချက်- M1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Mac mini ကို 719 ယူရို | ငါ mac ကပါ။
ကမ်းလှမ်းချက်- M1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Mac mini ကို 719 ယူရို
Ignatius ခန်းမ | | Apple mac Mini ကို, NOTICIAS
တစ်ဖန်၊ Macs နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Amazon တွင် လက်ရှိရရှိနိုင်သော အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းချက်နှစ်ခုကို သင့်အား အသိပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်၊ ၎င်းသည် M1 ပရိုဆက်ဆာပါရှိသော Mac mini ဖြစ်သည်။ 8 GB RAM နှင့် 256 သို့မဟုတ် 512 GB SSD သိုလှောင်မှု။
၂၀၂၀ Apple Mac Mini ...
ဤမော်ဒယ်၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ 799 ယူရိုဖြစ်သော်လည်း၊ လက်ရှိတွင် Amazon တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ၅၀% လျှော့စျေး၎င်း၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ခြင်း။ သာ 719 ယူရို. သို့သော် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်ကို 512 GB မော်ဒယ်တွင် တွေ့ရှိရသည်။
မော်ဒယ်နှင့်အတူတူ သိုလှောင်မှု 8 GB နှင့် 512 GB SSD သိုလှောင်မှုပုံမှန်စျေးနှုန်း 1.029 ယူရိုရှိပြီး၊ သို့သော်၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၎င်းကို Amazon တွင်ဝယ်နိုင်သည်။ ၅၇% လျှော့စျေး200 ယူရိုထက်ပိုမိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကိုယ်စားပြုသော 799 ယူရို၏စျေးနှုန်း.
မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံးမှာ M1 ပရိုဆက်ဆာ တပ်ဆင်ထားပြီး ပရိုဆက်ဆာ 8 cores ၊4စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ရည်စူးထားသော အခြား4သည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။. ထို့အပြင်၎င်းသည် 16-core အာရုံကြောအင်ဂျင်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
Thunderbolt3(USB-C) ပေါက်လေးခု- DisplayPort၊
Thunderbolt (40 Gbps အထိ)၊ USB 3,1 Gen2(အထိ 10 Gbps)၊ Thunderbolt 2၊ HDMI၊ DVI နှင့် VGA တွဲဖက်သုံးနိုင်သော အဒက်တာများ
USB3အပေါက်နှစ်ခု (5 Gbps အထိ)၊
HDMI 2.0 အပေါက်၊
Gigabit Ethernet အပေါက် (10 Gb Ethernet သို့ ပြင်ဆင်နိုင်သည်)၊
ဤမော်ဒယ်အထိထောက်ခံသည်။ မော်နီတာနှစ်လုံးကို တစ်ပြိုင်နက်: Thunderbolt မှတဆင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 6K@60Hz အထိ မော်နီတာတစ်လုံးနှင့် HDMI4မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး 60K@2.0Hz အထိရှိသော မော်နီတာတစ်ခု။
အခြားကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်မတူဘဲ၊ မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံး၏ရရှိနိုင်မှုသည်ချက်ချင်းဖြစ်သည်။ဒါကြောင့် မြန်မြန်ဝယ်ရင် မနက်ဖြန်မှာ ကံနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ ရနိုင်ပြီး ဒီပစ္စည်းတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပေးမယ့် အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို စမ်းသပ်ဖို့ စနေ၊
1GB RAM နှင့် 8GB Mac mini M256 ကို 719 ယူရိုဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
1GB RAM နှင့် 8GB Mac mini M512 ကို 799 ယူရိုဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Apple mac Mini ကို » ကမ်းလှမ်းချက်- M1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Mac mini ကို 719 ယူရို
Apple သည် macOS 2.7 ဗားရှင်းတွင် Python 12.3 ကို ဖယ်ရှားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Apple ၏ သုံးလပတ် ရလဒ်များ စံချိန်သစ် ထပ်မံချိုးခဲ့သည်။